China Solid Steel Self-feeding Fire Pit Basket vagadziri uye vatengesi | THYH
SOLID STEEL KUZVIDYA MOTO DONGORORO
Iyi yakanyanya kurema-basa Self-Feeding Fire Pit Basket ndiyo yakakwana yekuwedzera kune chero yekunze-inopfuta huni moto kana mhete yemoto.
Iyo Self-Feeding Fire Pit Basket yakagadzirirwa kupisa kwakanyanya kunoreva kuchengetedza huni dzako nekugadzira murazvo wakanyanya nematanda mashoma. Iri gomba rakasimba resimbi rinogadzirwa nemakumbo mana achisimudza tswanda kuitira kufamba kwemhepo kuri nani uye kugadzikana. Haisi chete ichi chibatiso chemoto chinobatika, asi chinobatidza moto wakanaka kupisa kuti unakirwe husiku hwese.
- Chengetedza huni nekugadzira murazvo wakanyanya nematanda mashoma
- Vanoisa huni kubva pasi kuitira kuti mweya ufambire zvakanaka
- Kuvakwa kwesimbi kwakakora kuchagara kwehupenyu hwose
Zvakapfuura: Corten Steel Dual Flame Smokeless Fire Pit
Zvinotevera: 38 ″ Gomba reMoto Ine Swivel Grill
Iyo Tianhua 36.5 ″ grate ikwidziso yakakwana kune yedu yakakurumbira 36 ″ Mhete yeMoto. Iwo 4 ″ makumbo anopa nzvimbo yakakwana pasi pegirati yekufefetera kana uchipisa huni dzemoto pamusoro payo. Iyo Tianhua 36.5 ″ grate ikwidziso yakakwana kune yedu yakakurumbira 36 ″ Mhete yeMoto. Iwo 4 ″ makumbo anopa nzvimbo yakakwana pasi pegirati yekufefetera kana uchipisa huni dzemoto pamusoro payo. Iyo yakakora 1/2 ″ simbi mbariro inoita iyi iyo yakaomesesa grati pamusika. Inogona zvakare kushandiswa se ...
Makomba eMoto Ekunze, Gomba reMoto Huni Kupisa Rou...